Mas'uuliyiinta Latvia ayaa xiray 10 qaybood oo ka mid ah filimada sawir-qaadaha caruurta - xnxx - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Mas'uuliyiinta Latvia ayaa 10 qof oo xayawaan ah oo xayawaan ah ku xiray xnxx
Dhaqdhaqaaq ballaaran oo todobaadkii hore ah, bilayska Latvia ayaa xiray 10 ka mid ah kuwa ugu firfircoon uguna firfircoon ee carruurta, sida uu xaqiijiyay madaxa Waaxda Ka hortagga Dembiyada Galmada. Booliska Gobolka Latvia, Oļegs Lavčinovskis.
Waad ku mahadsantihiin iskaashi caalami ah, toban raadin ayaa lagu qabtay guriga tobankii nin laba maalmood gudahood. Intii lagu guda jiray baadhitaannadaas, bilaysku waxa la wareegay kumbuyuutar iyo aalado badan oo lagu keydiyo xogta oo ay ku jiraan fara-xornimo ilmaha iyo caagag la mamnuucay.
Lavčinovskis ayaa sharxay in tobankii nin ee aan loo doortin shakhsiyaadka - macluumaadka ku saabsan iyaga oo ay bixiyeen adeegyo booliis oo wadamo kale ah. Ugu dambeyntii, dadkan ayaa loo aqoonsaday inay yihiin tobanka ugu firfircoon ee carruurta ee ugu firfircoon ee ka shaqeeya dalka.
Wakiil ka tirsan booliska gobolka Latvian ayaa sheegay in laga soo bilaabo bannaanka toban nin oo aan shaki ku jirin: waxay qabteen shaqo iyo qoys. Waxay ku nool yihiin meelo kala duwan oo Latvia ah waxayna leeyihiin inta u dhaxeysa 20 iyo 50 sano.
Midkoodna ma leh taariikh dembi oo la xidhiidha denbiyada galmada.
"Waxay ahayd noloshooda qarsoodi ah. Waxay u maleynayeen inay tahay wax la aqbali karo - inay sameeyaan waxa ay sameeyeen, "ayuu yiri Lavčinovskis.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://bnn-news.com/latvian-authorities-detain-ten-child-pornography-distributors-199466
Shirkadaha waddooyinka way iska daayaan talooyinka wasiirka ee ah in ay joojiyaan aagga boostada